Snn Nepal चितवनमा फेरि एक साता थपियो निषेधाज्ञा – Snn Nepal
चितवनमा फेरि एक साता थपियो निषेधाज्ञा
चितवन । चितवन जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप गरिएको छ । जिल्ला कोभिड व्यवस्थामा केन्द्र डीसीएमसीको बुधबार सम्पन्न बैठकले आज रातिदेखि सकिन लागेको निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप गरेको हो चितवन
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक आदेश जारी गर्दै १० असार राति १२ बजेसम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा थप गरेको हो । निषेधाज्ञा थप गर्दा यसअघि जारी आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
आदेशले डिपार्टमेन्ट स्टोर्स खुल्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले खाद्यान्न विक्री वितरण गर्ने डिपार्टमेन्ट स्टोर्स खोल्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । यसअघिको निषेधाज्ञालाई नै यथावत राखिए पनि डिपार्टमेन्टल स्टोर्सका हकमा केही खुकुलो बनाइएको छ । पुस्तक पसल स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै खोल्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
मृत्यु संस्कारमा जाँदा २५ जना भन्दा बढी सहभागी नहुन, रासायनिक मल तथा कृषि बीउबिजन विक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न पाइने जनाइएको छ । सवारी साधन मर्मत केन्द्रमा तीनजना भन्दा बढी नराखी काम गराउनुपर्ने जनाइएको छ । चितवनमा गत वैशाख १६ गते राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ ।
जिल्लामा हालसम्म १५ हजार १३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये एक हजार ४२९ जना सक्रिय सङ्क्रमित हुन् । सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये १२९ को अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य सार्वजनिक आइसोलेसन तथा होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । कोरोनाका कारण यस जिल्लामा २५२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
४.	गुटको राजनीतिका कारण कांग्रेस पार्टी लथालिङ्ग भयो– शेखर कोइराला
५.	ट्रयाक्टर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु, सवार एक घाइते
८.	आज महाअष्टमी पर्व, महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा गरिँदै
९.	भारतमा १६ हजार कोरोना संक्रमित थपिए
विश्वकप छनोटमा चिलीको शानदार जित
भारतमा थप १७ हजार जनामा संक्रमण